Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa doorashadii shalay waddankaasi ka dhacday ku tilmaamay inay ahayd mid taariikhi ah, waxaana xilliga socota tirinta codadka doorashaddii baarlamaaniga ee dalkaasi ka qabsoontay.
Doorashadan ayaa waxaa isku diiwaan-geliyay ilaa 37 milyan oo qof. Ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa horay u ballan qaaday inuu Ethiopia ka qaban doono doorasho xor ah oo si furan loogu tartamo. Hase ahaatee waxaa doorashadii Isniinta hareeyey xubno ka tirsan mucaaradka oo qaadacay, deegaannada qaar oo doorashoodii la dib dhigay, iyo colaadda ka socota gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimaha doorashadan iyo halka ay wax marayaan ka wareystay Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha Africa iyo Carabta deggana magaalada London ee dalka UK.